Pejy an-tsary : fiofanana tany Antsirabe
Published Date: 29 octobre 2021
Andro faha-4, sady famaranana ny atrikasa fiofanana ataon’ireo Lehiben’ny Fonja miisa 42, eto Antsirabe. Lohahevitra: « fahaiza-mitantana krizy sy haitarika » (gestion de crise et leadership des Chefs d’Etablissements pénitentiaires). Mpanohana ny PAJMA.
Fivorian’ny Filan-kevitra Ambonin’ny Mpitsara (CSM)
Published Date: 28 octobre 2021
Ezaka iombonana ny fahamarinana eo amin’ny Fitsarana
Mazava ny lalan-tsaina apetraky ny Filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara amin’ny tanjona tratrarina momba ny Fitsarana. Ny fanajana ny lalàna sy ny fametrahana ny tany tan-dalàna dia mila fifanomezan-tanana. Ezaka iombonana ny fahamarinana eo amin’ny Fitsarana eto Madagasikara. Vonona tanteraka ary manokatra ny varavarany ny Ministeran’ny Fitsarana.
Nivoitra ireo tanaty fanazavana nomena ireo mpanao gazety, taorian’ny fivoriana androany Alakamisy 28 Oktobra 2021, tetsy amin’ny Episcopale Antanimena, niarahan’ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana Minisitry ny Fitsarana Atoa IMBIKI Herilaza, tamin’ny mpikambana ao amin’ny « Justice et Paix ».
Voaresaka ihany koa ny raharaha fikasana hanakorontana tao amin’ny Fonjan’i Farafangana, ny fiakarana Mpitsara miisa 4 amin’ny fivorian’ny Filan-kevitra Ambonin’ny Mpitsara (CSM), ny raharaha « Apollo 21 », ny didy fampisamborana iraisam-pirenena teratany Malagasy miisa 2, ary ny fanatrarana ny taha 70/30.
Atolotra manontolo, tahaka izao ny fanazavana misesy entin’ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana Atoa IMBIKI Herilaza, sy ny Sekretera Jeneralin’ny « Justice et Paix » Mompera Sata.
Pejy an-tsary androany Alakamisy 28 Oktobra 2021
Andro fahatelo amin’ny atrikasa fiofanana ataon’ireo Lehiben’ny Fonja miisa 42, eto Antsirabe. Lohahevitra:
« fahaiza-mitantana krizy sy haitarika » (gestion de crise et leadership des Chefs d’Etablissements pénitentiaires).
Mpanohana ny PAJMA.
Fanamafisana ny fahaiza-manao: Miofana 4 andro ireo Lehiben’ny Fonja
Published Date: 27 octobre 2021
Mazava ny tanjona. Famerenana ny fahatokisan’ny vahoaka ny Fitsarana. Ho an’ ny Fandraharahana ny Fonja dia tafiditra ao ohatra ny fanajana ny zon’olombelona, ny fidirana amin’ny sehatry ny haikajy mirindra sy ny tontolon’ny teknolojia vaovao. Ilaina tokoa noho izany ny fanamafisana sy fanatsarana ny fahaiza-manao.
Nisokatra androany Talata 26 Oktobra 2021 eto amin’ny « Hôtel Ty Vahiny » eto Antsirabe, ary haharitra 4 andro, ny atrikasa fiofanana ho an’ireo Lehiben’ny Fonja miisa 42 mianadahy ( ka ny amin’izy ireo 2 Lehiben’ny Fonja misy fiarovana manokana ao Imerintsiatosika sy eny Tsiafahy, ary ny 1 Lehiben’ny Ivotoerana Fitaizana Mandrosoa Anjanamasina). Fiofanana mitohy, ka ny 2 andro voalohany dia hiompana amin’ny « fahaiza-mitantana krizy any am-ponja ». Ny 2 andro farany kosa dia ny haitarika (leadership) no lohahevitra.
Mpanohana izao hetsika izao ny « Agence Française de Développement » (AFD), amin’ny alalan’ny Tetikasa « Projet d’Appui à la Justice de Madagascar » (PAJMA).
Mitondra fanampim-panazavana misesy, ny Talen’ny Fandaharan’asa sy Fampitaovana ny Fandraharahana ny Fonja (DPRP), Rtoa RAHERINIAINA Emma Clotilde Vivianne, sy ny Tale Jeneralin’ny Fandraharahana ny Fonja (DGAP), Atoa RANAIVO ANDRIAMAROAHINA Tovonjanahary.
Fiaraha-miasa amin’ny any ivelany: Naneho ny fahatokisany ny Governemanta Frantsay
Published Date: 26 octobre 2021
Vonona ny Governemanta Frantsay ny hanohana hatrany ny fampandrosoana ny sehatry ny Fitsarana Malagasy. Ho fanehoana ny fahatokisany, dia tonga nitsidika ara-pomba fanajana teto Faravohitra androany Talata 26 Oktobra 2021, ny Masoivoho Frantsay, SEM Christophe BOUCHARD. Samy mahazo ny anjara fanohanana avokoa ny sehatry ny Fitsarana sy ny Fandraharahana ny Fonja.
Mitondra fanampim-panazavana misesy tahaka izao, ny Masoivoho Frantsay, SEM Christophe BOUCHARD, sy ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjaka­na Minisitry ny Fitsarana, Atoa IMBIKI Herilaza.